Manchester United ayaa isbuucaan dalab ka gudbin doona xiddiga Borussia Dortmund Jadon Sancho laakiin dalabkooda lama dhageysan doono sida ay sheegtay Sky Sports madaama Dortmund ay ku adkeysaneyso in la soo dhaafay waqtigii ay iibin lahaayeen xiddiga Ingariiska oo ku ekeyd 10kii bishii Agoosto.
Manchester United ayaa diyaar u ah inay dalab 13 milyan euro ah miiska u saarto kooxda FC Porto iyagoo doonaya daafaca bidix Alex Telles sida ay sheegeyso jariirada The Sun. Si kastaba, lacagtaan ayaa aad uga yar 20ka milyan euro ee ay dooneyso Porto. Qandaraaska Telles ayaa dhacaya xagaaga danbe laakiin Porto ayaa ku adkeysaneysa in la siiyo lacagta ay dalbaneyso.
Wakiilka xiddiga khadka dhexe ee Arsenal Lucas Torreira ayaa haatan ku sugay Madrid si uu u la kulmo Atletico. Waxaa weli wadahadalo u socdaan Arsenal iyo Atletico si heshiiska loo dhameystiro. Arsenal waxay weli ku adkeysaneysaa in ciyaaryahanka la iibsado bedelkii ay amaah ku fasaxi lahaayeen.
Manchester United ayaa isha ku heysa weeraryahanka Barcelona Ousmane Dembele. Ilo ku dhow ciyaaryahanka ayaa u sheegay Sky Sports Germany inuu doonayo inuu sii joogo Barcelona.
Arsenal ayaa dalab 38 milyan euro ah ka gudbisay xiddiga khadka dhexe ee Lyon Houssem Aouar sida ay sheegtay jariirada Faransiiska ee L’Equipe laakiin kooxda Faransiiska ayaa dooneysa 50 milyan euro.
Xiddiga khadka dhexe ee Manchester United Andreas Pereira ayaa tijaabada caafimaadka u maraya kooxda Talyaaniga ee Lazio berri oo Arbaco ah sida ay qortay La Gazzette dello Sport. Heshiiska uu ugu biiray waa mid marka hore amaah ah iyadoo Lazio ay qiyaar u heysato inay si joogta ah kula wareegaan xagaaga danbe.
Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa cadeeyay in kooxdiisa aysan la soo wareegi doonin ciyaartooy kale ka dib markii ay soo iibsadeen Thiago Alcantara iyo Diogo Jota. “Suuqa ma geli dioono ilaa iyo wax weyn ay dhacaan mooyee” ayuu yiri.
Chelsea ayaa diyaar u ah inay 40 milyan euro ku iibiso daafaca dhexe Kurt Zouma sida ay sheegtay Le10sport, waxayna taasi soo jiidatay kooxaha Premier League ee Leicester City iyo Everton.
Heshiiska uu Lucas Paqueta uga tagayo AC Milan uguna wareegayo kooxda Lyon ayaa gabagbo ku dhow iyadoo lagu iibsanayo 21 milyan euro sida ay sheegtay Sky Sport Italia. Rossoneri ayaa 23 jirkaan khadka dhexe ku soo iibsatay 38.4 milyan euro 18 bilood ka hor.
Leeds United ayaa ku dhow inay 20 milyan euro kula soo saxiixato xiddiga khadka dhexe ee Bayern Munich Michael Cuisance.
Dagaalka Afka Ah Ee U Dhaxeeya Jose Mourinho & Ole Gunnar